राजेन्द्र किराँती | Ratopati
नक्साको राजनीति र एमसीसी रणनीति access_timeजेठ १७, २०७७
विषय प्रवेश पछिल्लो समय नेपाल–भारत सीमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । भारतले नेपाली भूमि कालापानी हुँदै चीनको मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरेपछि स्थिति तनावपूर्ण भएको हो । उसले यसअघि नै उक्त भूभागमाथि अतिक्रमण गरी नक्सा सार्वजनिक गरिसकेको छ । त्यसको प्रतिक्रिया स्व...
बलियो आन्तरिक राष्ट्रियताले हस्तक्षेपविरुद्ध लड्ने हैसियत राख्छ access_timeजेठ १०, २०७७
विषय प्रवेश हालै भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरेपछि नेपाली राष्ट्रिय राजनीति तरङ्गित भएको छ । यो खबरले सिंगो देशभक्त नेपालीहरु मर्माहत भएका छन् । भारत विरोधी भावना उत्कर्षमा पु-याइदिएको छ । भारतीय वि...
खतरामा विश्व–महाशक्तिको श्रीपेच access_timeबैशाख २५, २०७७
विषय प्रवेश विश्वव्यापी रूपमै कोभिड–१९ बाट मर्ने र सङ्क्रमित हुनेक्रम बढिरहेको छ । यो कुनै क्षेत्र, मुलुक, समुदाय, सम्प्रादय र वर्ग विशेषको मात्र सवाल रहेन । वस्तुतः यो महामारी सिङ्गो विश्व मानव समुदायको साझा सवाल बनिरहेको छ । यो आज...
यसरी मिलाउन सकिन्छ नेकपाको विवाद access_timeबैशाख १८, २०७७
विषय प्रवेशः आज कोभिड–१९ विश्वकै साझा दुस्मन बनिरहेको छ । यस्तो महासङ्कटको बेला सबैखाले स्रोतसाधनको समुचित उपयोग गर्दै एकताबद्ध भएर महामारी विरुद्ध जुट्नुको अर्को विकल्प छैन । यही गम्भीर सच्चाइलाई हृदयङ्गम गर्दै नेपालले पनि लकडाउन लगायतका सबैखाले सावधानीहरु अपन...
यसरी खुकुलो गर्न सकिन्छ लकडाउन access_timeबैशाख १०, २०७७
विषय प्रवेशः यतिखेर विश्व मानव समुदाय नै कोभिड–१९ को महाव्याधीबाट अक्रान्त छ । यसले आजसम्म मान्छेले लामो सङ्घर्षशील र कष्टसाध्य ऐतिहासिक प्रक्रियाबाट विकास गरेको सभ्यता अनि जटिल खोज–अनुसन्धान एवं प्रयोगद्वारा स्थापित गरेको वैज्ञानिक मान्यत...
सांस्कृतिक क्रान्ति, नक्सलवादी र झापा आन्दोलन access_timeफागुन २२, २०७६
विषय प्रवेश ‘चिनियाँ अध्यक्ष माओ हाम्रो पनि अध्यक्ष हो साथै चिनियाँ बाटो नै हाम्रो पनि बाटो हो ।’ यो नक्सलवादी आन्दोलनको प्रणेता चारु मजुम्दारले पार्टी दस्तावेजमा गम्भीर ढङ्गले उठाएको विषय हो । यो भनाइबाट के स्पष्ट हुन्छ भने, नक्सलवादी आन्दोलनमा चिनियाँ क्रा...
समाजवादी अर्थराजनीतिक पद्धति access_timeकात्तिक ७, २०७६
परिभाषा कुनै पनि खास समाजको चरित्र, संस्कृति र प्रवृत्ति भनेको अर्थराजनीतिले निर्धारण गर्छ । अर्थात् हरेक वस्तु वा सामाजिक सत्ताको चरित्र अर्थराजनीतिद्वारा निर्देशित हुन्छ । मुलुक वा समाजलाई कुन दिशातर्फ डोर्याउने भन्ने सवाल पनि अर्थराजनीतिले नै...
इन्डो–प्यासिफिक रणनीति : नवऔपनिवेशिक प्रभुत्व विस्तारको विकसित अवतार access_timeभदौ २५, २०७६
पृष्ठभूमि पछिल्लो समय विश्वमा प्रभावशाली बन्ने नितान्त भिन्न रणनीतिहरू विकास भइरहेको छ । यो परम्परागत उपनिवेश जस्तो छैन । अर्थात आज प्रभुत्व विस्तार पनि आर्थिक विकास र समृद्धिमार्फत गरिन्छ । शक्तिराष्ट्रहरू यही रणनीतिद्वारा नै विश्वमा आफ्नो प्रभाव फैलाइरहेका छन् । यसै अन्तर्ग...
कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा access_timeभदौ १०, २०७६
-राजेन्द्र किराँती “विचारधारात्मक तथा राजनीतिक कार्यदिशा सही र गलत विन्यासले सबै कुराको निर्धारण गर्छ । यो सही भए सबै चिज प्राप्त गर्न सकिन्छ र गलत भए प्राप्त भएको पनि गुम्दछ ।” माओको यो उद्गार साँचो कम्युनिस्ट पार्टीका लागि न्यूनतम् नीतिवाक्य हो । वस्तुतः का...
इरान–अमेरिकी द्वन्द्वका आयाम access_timeसाउन ११, २०७६
सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिपछि इरान र अमेरिका बीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण देखिन्छ । धम्की, नाकाबन्दी र तिक्तताकै बीच झण्डै चार दशक समय वितिसकेको छ । अझ पछिल्ला केही दिनयता इरान र अमेरिका बीच सङ्कटपूर्ण स्थिति सिर्जना भएको छ । गत जुन २० तारिखका दिन हरमुज जल डमरुमा इरानले ...
अर्थराजनीतिक दृष्टिमा बाढीपहिरो access_timeसाउन ४, २०७६
यो वर्ष पनि बाढीपहिरो र डुबानले व्यापक धनजनको क्षति गरेको छ । योक्रम विगतका वर्षहरुमा भन्दा झनै बढ्दै गएको देखिन्छ । गत सातादेखि परेको अविरल वर्षाका कारण मुलुकभर ८४ भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ । यता ३२ जना बेपत्ता भएका छन् भने ३८ जना घाइते छन् । ...
आडम्बर, ढोङ र समाजवाद access_timeअसार २६, २०७६
वर्तमान विश्व अर्थराजनीतिमा पुँजीवाद हावी रहेको छ । वस्तुतः पुँजीवाद रुप भनेको असीमित नाफा र सम्पत्ति कमाउने अर्थराजनीतिक सम्बन्ध हो । यो खुल्ला, स्वतन्त्र र प्रतिष्पर्धात्मक बजारमा आधारित हुन्छ । जसरी र जेगरेर भए पनि अरूले भन्दा बढी नाफा र सम्पत्ति आर्जन गर्ने आत्मकेन्द्रित...
किन हुन्छ सैन्य विद्रोह ? access_timeबैशाख ६, २०७६
भूमिका विश्व मानव समाजको इतिहासमा सैन्य विप्लव सामन्य परिघटना जस्तो भइसकेको छ । यो इतिहास सिद्ध तथ्य हो । भर्खरै मध्य अफ्रिकी मुलुक सुडानमा यस्तै सैन्य विप्लव भएको छ । यसले त्यहाँका राष्ट्रपति ओमर अल वसिरको तीस वर्षे शासन समाप्त गरिदिएको छ । ...
यसरी गरौं विप्लव नेकपाको राजनीतिक समाधान access_timeचैत ११, २०७५
सरकारले गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी हर्कत गरेको भन्दै विप्लव नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसपछि विप्लव नेकपा एकाएक चर्चामा आएको छ । प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ र पर्दैन भन्ने मुद्दाले सिङ्गो राजनीति नै विभाजित भएको छ । उसले भ्रष्टाचार र दलालीविरुद्ध भन्दै जताततै बम विस्फोट, आगजनी...
सीके राउत अवतरणका आयामहरू access_timeफागुन २६, २०७५
गत शुक्रबार सीके राउतको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन र सरकारबीच एघार बुँदे सहमती भएको छ । कमलादीमा प्रधानमन्त्रीको प्रमुख आतिथ्यमा राउतसँग सहमती भएको हो । सन् २००६ देखि मधेसलाई विखण्डन गर्नुपर्छ भन्दै विभिन्न गतिविधि गर्दैआएको समूहसँग यस्तो राजनीतिक सहमती ...
उत्पादन तथा सेवामूलक अर्थतन्त्र र समाजवाद access_timeमाघ १७, २०७५
शास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरूले अर्थशास्त्रलाई धनको विज्ञान भनेर परिभाषित गरे । एडम स्मिथले यस सन्दर्भमा राज्यको धन भन्ने सनसनीपूर्ण पुस्तक नै लेखे । सामन्यतय अर्थशास्त्र भनेको त्यो सामाजिक विज्ञान हो, जसले माल र सेवाको उत्पादन, वितरण र उपभोग गर्छ । वस्तुतः आधुनिक शास्त्रीय राजनीतिक...
राज्यसत्ता र कार्यदिशाको सवाल access_timeमाघ १, २०७५
सत्तारुढ दल नेकपाको स्थायी समिति वैठक भर्खरै सम्पन्न भएकोछ । अध्यक्षद्वयद्वारा पेश गरिएको दस्तावेजमा सैद्धान्तिक राजनीति भन्दा पनि औसत प्राविधिक राजनीतिक विषयहरूले प्राथमिकता पाएको देखिन्छ । यसकारण बैठकमा सैद्धान्तिक वैचारिक विषयहरूमा घनीभूत बहस भएन । मूलतः बैठक साङ्गठान...
विकास र समृद्धि के हो ? access_timeपुस २२, २०७५
पछिल्लो समय विकास र समृद्धिको कुरा आवश्यकताभन्दा बढी नै भइरहेको महशुस हुन्छ । यो साझा सवला बनिरहेको छ । वास्तवमा कुनै पनि वस्तु वा व्यक्तिको आकार, चरित्र र विशेषतामा आउने परिवर्तनलाई नै विकास भनिन्छ । सार्वभौमतः यो अघिल्लो भन्दा गुणात्मक रूपमा नै फरक हुन्छ अर्थात् वस्त...
कम्युनिस्ट सरकारका ऐतिहासिक कार्यभारहरू access_timeपुस ८, २०७५
वस्तुतः समाज रूपान्तरणको ऐतिहासिक प्रक्रियालाई नै कम्युनिस्ट आन्दोलन भनिन्छ । कम्युनिस्टहरूले वस्तु वा सत्ताको विकास, विनाश र रूपान्तरण ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी प्रस्थापना अनुरूप हुने मान्यता राख्छ । यो रणनीतिक उद्देश्यमा आधारित सङ्गठित र योजनाबद्ध आन्दोलन हो अर्थात यो क...
स्वस्थ्य सेवाको व्यापारीकरण access_timeकात्तिक २९, २०७५
शारीरिक र मानसिक रूपले तन्दुरुस्त रहनु नै स्वस्थ्य हो । स्वस्थ्य सेवा मानिसको नैसर्गिक अधिकार हो । स्वस्थ्य नै धन हो । स्वस्थ्य दिमाग नै स्वस्थ्य शरीर हो । स्वस्थ्य समान र सबैका लागि हुनुपर्छ । स्वस्थ्य नै अन्य सम्पूर्ण क्षेत्रको परिसूचक हो । स्वस्थ्य सेवाको अपरिह...
के हो समाजवादी शिक्षा पद्धति ? access_timeकात्तिक ११, २०७५
आदर्श राज्यका परिकल्पनाकार प्लेटोले शरीर र मस्तिष्कलाई सकेसम्म सुन्दर र पूर्ण बनाउने प्रक्रिया नै शिक्षा हो भनेर व्याख्या गरेका थिए । त्यस्तै हर्बर्ट स्पेन्सरले शिक्षालाई पूर्ण जीवनको तयारी भनेको थिए । यता रुसोले बच्चालाई पूर्ण बनाउने कला नै शिक्षा भनेका थिए । यसैगरी जनवादी...
समावेशी लोकतन्त्रको आवश्यकता access_timeअसोज १८, २०७५
वर्ग समाजअन्तर्गत अस्तित्वमा रहेको कुनै पनि तन्त्र र वादहरू वर्गसापेक्ष हुने गर्छ । यो खास समाजको अर्थराजनीतिक सम्बन्धद्वारा निर्देशित हुन्छ । साम्यवादबाहेक अन्य तन्त्र र वादहरूमा वर्गअधिनायकत्व, वर्गनियन्त्रण र वर्गदमन कायम रहन्छ । त्यसैले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, जनवाद र समाजवाद स...
करको चरित्र access_timeअसोज ४, २०७५
राज्यको मेरुदण्ड भनेको अर्थराजनीति नै हो । राज्य अङ्ग हो भने त्यसमा प्राण वा जीवन गति पैदा गर्ने माध्यम भनेको अर्थतन्त्र हो । यसले राज्यरूपी सुन्दर शरीरमा रक्तसञ्चार गराउँदै जीवन्तता प्रदान गर्छ । यही आर्थिक क्रियाकलाप अन्तर्गत राज्यले उद्योग, कलकारखाना, व्यापार वा व्यवसाय...